Pakistana: Mirongatra ny fanararaotana ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 2:20 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 23 Martsa 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mampiahiahy ny firongatry ny tranga fanararaotana ny ankizy ao Pakistana. Araka ny filazan'ny tompon'andraikitry ny UNICEF ao an-toerana Shamshad Qureshi, ny tsy fahampian'ny fampiharana ny lalàna, ny tandrevaka ataon'ny ray aman-dreny ary ny tsy fisian'ny fanentanana ho an'ireo ankizy sy ny fiarahamonina no anton'izany. Nilaza ihany koa izy fa ny tena fototry ny fametavetana zaza any Pakistana dia ny fahamoran'ny fifaneraserana amin'ny ankizy noho ny tsy firaharahan'ny ray aman-dreny.
Niresaka momba ny fanararaotana ny ankizy sy ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona i Faheem Haider tao amin'ny bilaogy Bangladesh Foreign Policy. Tsy nisalasala izy raha nampiseho anay ny lafiny iray hafa izay efa mahazatra amin'ny fanararaotana ny ankizy.
“Rehefa tsy mahavita mamelona intsony ny fianakaviany mihamitombo isa ireo ray aman-dreny very fanantenana dia mandefa ny zanany hiasa an-trano na hitaiza zaza any amin'ny fianakaviana mpanankarena. Lasa taizan'ny mpampiasa azy ireo ankizy ireo noho izany ary matetika atao toy ny fananany manokana. Tsy hita intsony ireo ray aman-dreny niteraka ary matetika any amin'ny zato kilaometatra maromaro izy ireo no monina ka tsy mahafantatra akory fa iharan'ny tsindrihazolena sy ny hatezeran'ireo mpampiasa azy ratsy fanahy ireo zanany.
Tsy misy ny rariny ho an'ireo ankizy ireo. Manatsingevana ny fahantrana goavana izy ireo ary fanomezana natao ho an'ny zava-misy mampiahiahy. Tsy misy ho antenaina izy ireo; Tsy misy olona mahatsikaritra ny vokatr'izany fampijaliana ankizy izany ary izy ireo ihany koa dia tsy mahalala ny fomba ahafahany miala amin'izany. Mpampianatra tsy mihaino azy ireo ny rariny [ny Fitsarana] ho an'ireo ankizy ireo. “
Tsy mpandova ara-politika malaza fotsiny i Fatima Bhutto fa misahana ny maha-olona ihany koa izy. Tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra iray tao amin'ny The Daily Beast no nanoritsoritany ny zava-miseho mampalahelo mikasika ny fanararaotana ny ankizy:
“Nahatohina ny firenena ny famonoana feno herisetra an'ilay mpanampy an-trano kely 12 taona, izay heverina fa novonoin'ny manampahefana mpampiasa azy. Kanefa noho ny fisian'ny kolikolin'ny governemanta sy ny famonoana vehivavy manan-karena iray ho fiarovam-boninahitra, afa-maina hatrany ireo mpanan-karenan'ny firenena.
Shazia Masih, zazavavikely 12 taona izay raha jerena toa mbola kely noho izany aza, dia nalevina taorian'ny fanompoam-pivavahana Kristianina tao amin'ny fiangonana Katedraly tao Lahore tamin'ny herinandro lasa. Nampiasain'ny mpanankarena sady manampahefana filoha teo aloha an'ny Fikambanan'ny Bar ao Lahore izy amin'ny karama 8 dolara isam-bolana ary nanadio ny toeram-pivoahan'ireo mpiasany, ny fiaran'izy ireo izay mameno ny garazy tsara tarehy any ambanivohitra, ary ireo loto miangona ao an-tranon'izy ireo. “
Mampiseho ny mpampianatra iray any amin'ny sekolim-panjakana izay nanararaotra namono mpianatra iray mba ho fanasaziana azy ity horonantsary Youtube ity saingy tsy nisy olona nanao na inona na inona.
Mahasahana karazana heloka bevava atao amin'ireo zaza tsy ampy taona ny teny hoe ‘fanararaotana ankizy’. Sady manondro fanararaotana ara-batana no manondro fampangirifiriana ara-tsaina. Midika fanararaotana ny fampiasana ankizy iray ho kilalaon'olondehibe. Midika fanararaotana ihany koa ny fitadiavana mpiasa mora karama. Midika fanararaotana ny fanaovana fitaovana ny ankizy iray ka atakalo vola na zavatra hafa . Midika fanararaotana ny fanerena ny zanaka mbola kely hanao asa tena mafy sy mampidi-doza ny tenany.
Firenena iray tsy dia ahitana firy ny fiarovana ireo tanora miatrika ny tontolo mampihoronkoditry ny fanararaotana ankizy eo amin'ny tontolon'ny fahazazany i Pakistana.